Sidee looga Qabsadaa Biyaha Cowska iyo Uumiga Cimilada Qalalan | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Khayraadka
Adduunyada oo lamadegaanku sii socdo, raadinta xalka ayaa sii wadaya wadooyin badan oo lagula dagaallamayo biyo yaraanta. In kasta oo barta dhexdeeda aan marar badan ka hadalnay xallinta abaaraha, ama dhibaatada ay keeneen, markan waxaan ka hadlaynaa ceeryaanta. Sidee bay tahay hawsha qabashadeeda iyo u beddelkeeda biyo.
Kahor intaadan bilaabin, maskaxda ku hay taas ma aha nidaam biyo abuur "abuur" ah. Dhab ahaantii biyaha jira waxaa lagu qaataa, microdrops, laakiin waa la qaataa. Taasi waxay ka dhigan tahay Halkii laga abuuri lahaa, qaabkani wuxuu leeyahay faa iidada dib u celinta adeegsiga, labadaba waraabka iyo isticmaalka. Xaqiiqdii waa hab aad u fiican waqtiyadaas oo ay jiri karaan ceeryaamo, laakiin waxaa jira abaaro, waraabku ma joogsanayo. In yar oo biyo lagu daray. Waxaan hoos ku sharaxeynaa
1 Kuwa ceeryaamo qabta. Gudiyo biyaha dabin
3 Dayactirkeeda? Ugu fiican. Ficil ahaan waxba
Kuwa ceeryaamo qabta. Gudiyo biyaha dabin
Qaybaha qaboojinta ceeryaanta ama shaashadaha waxaa loogu talagalay inay soo ururiyaan qoyaan ama ceeryaamo. Ujeeddadeedu waa in lagu gaaro isku-uruurinta qaybaha biyaha, illaa ay cufan yihiin, taas oo ah, u beddelo dhibco. Fikraddu waxay u dhalatay sidii xal loogu heli lahaa meelaha la'aanta dareerahan qiimaha badan ay sida ugu dhakhsaha badan u ahayd. Iyo runti, waxay ka shaqeyn karaan aag kasta, maxaa yeelay xitaa cidlada habeenki waxaa jira qoyaan. Arrin kale ayaa ah, in qaadashadu ay aad u badan tahay, taas oo ku xirnaan doonta huurka ama ceeryaanta aagga bannaan.
Qaabka ay u shaqeeyaan waa mid aad u fudud. Maaddaama meydadka yaryar ee biyuhu ay deggaan shaashadda, waxay isku urursadaan inay sameeyaan dhibco waaweyn. Dhibcahaani, culeyskooda marka uu dhammaado waxay u muuqdaan inay ku dhacaan culeys. Qeybta hoose waxaa ku sugan aruuriye biyahan dhacaya, kaas oo loo jiheeyo barta la doonayo. Waxay si toos ah ugu noqon kartaa dhirta, ama weelasha biyaha kaydiya.
The Mist Trap Panels waxaa laga sameeyaa mesh si sax ah loo farsameeyay kaas oo lagu mudayo oo kaliya caarada qalin. Waxaa jira dhowr nooc, laakiin tusaale ahaan, mid ka mid ah kuwa ugu raqiisan oo jira oo aad loo adeegsado waa midka caagga ah. Kuwani, tusaale ahaan, dhexroorka godadka ay ceeryaanta ama qoyaanku "ka soo baxaan" waxoogaa wey ka weyn yihiin. Waxay sababi kartaa xoogaa luminta haynta ceeryaamo, laakiin waa inaysan lumin isticmaalkeeda. Mitir laba jibbaaran oo mesh ah wuxuu awood uleeyahay inuu helo 4 ilaa 15 litir oo biyo ah habeenki!
Fikradda ayaa ah in lagu dhajiyo meelaha dhaadheer, ama meelaha ay inta badan dabayshu ka socoto. Waxay sidoo kale badanaa ka yimaadaan 300 ilaa 800 mitir heerka badda. Laakiin sidaan soo sheegnay, run ahaantii meel walba oo ficil ahaan ah ayaa laga heli karaa.
Waa in lagu xisaabtamo, tusaale ahaan, in ceeryaamo aysan isku nadiif ahayn meelaha oo dhan, biyaha waa wasakhoobi karaan. Waxay kuxirantahay aaga, waxaa lagu keydin karaa haamo hadii isticmaalkeedu uu sii balaadhi doono hadhow oo aan la nijaasayn. Sidoo kale, haddii biyuhu aysan aad ugu habboonayn isticmaalka xitaa marka la keydiyo, ururinta maalinlaha ah waxaa raaci kara shaandhaynta. Hadday yihiin cudbi, ciid quartz, quruurux, dhuxul, koloriin, iwm.
Dayactirkeeda? Ugu fiican. Ficil ahaan waxba
Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in rakibideedu uu yahay mid aad u fudud oo aan u baahnayn qalab badan, dayactirkeedu waa mid aad u fudud. Hase yeeshee, dhibaatooyinka yaryar qaarkood ayaa soo bixi kara, sida kala-goynta tuubooyinka. Waxay kuxirantahay maaddada, way fiicnaan laheyd in la beddelo, ama waa lagu hagaajin karaa iyadoo la shaabadeeyo haddii aysan aad u weyneyn. Ugu dambayntii waxaa laga yaabaa inay dillaacdo ama ilmo ka dhacdo dharka. Badanaa, si dhakhso ah ayaa loogu hagaajin karaa irbad iyo dun.
Waxa ugu xun ee aan ka heli karno inaan noqonno shaashado waaweyn oo fudud ayaa ah in duufaan xoog ama duufaan wata ay baabi'iso. Xaaladdaas, ka-hortagga ayaa had iyo jeer ka fiican daaweynta, iyo saadaalinta dabaysha, ka noqoshada waqtigeeda. Sababta kale waxay noqon kartaa jiir yar, ama xayawaan harraadsan oo ka agdhow. Waa in maanka lagu hayaa in haddii weelku biyo badan soo bandhigo, dhibaatooyinkaas ay tahay in wax laga qabto.
Inta badan, cimri dhererkiisu meeraha badiyaa waa ilaa 5 sano. Kawaran haddii aan sameyno xisaab yar, mid waliba wuxuu na siin karaa tan oo tan oo biyo ah inta lagu gudajiro noloshiisa isticmaalka. Nidaam weyn oo lagula dagaallamo abaaraha, kaas oo u qalmay qoraallo qoraal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Khayraadka » Sida Looga Qabto Biyaha Ceebka iyo Qoyaanka Cimilada Qalalan
Waa bedel aad u fiican oo loogu talagalay Bajacalifornia iyo Sonora ee Mexico
Jawaab Guadalupe Delgado